Donald Trump oo ka digay xil ka qaadista loo qalqaalinayo | Allbalcad Online
Home WARARKA Donald Trump oo ka digay xil ka qaadista loo qalqaalinayo
Donald Trump oo ka digay xil ka qaadista loo qalqaalinayo
Wuxuu Trump ka digay in arrintaasi ay sababi karto inay kadhalato carro aad u xoog badan. Aalka Wakiillada ayaa lagu wadaa in ay maalinta Arbacada ee barri ah u codeeyaan qodobka dastuurka ee xil ka qaadista loogu sameynayo Trump.
“Waxay ila tahay in [howsha xil ka qaadista] ay sababeyso cadho xad dhaaf ah oo ka dhan doonta waddankeenna. Anigu ma doonayo qalalaase,” ayuu yiri Mr Trump. Wuxuu madaxweynaha xilkiisu sii dhammaanayo hadalkan jeediyay xilli uu maanta ka sii baxayay Aqalka Cad, isagoo ku sii socday gobolka Texas ee darbiga xadka laga dhisayo.
Previous articleBeesha Caalamka oo war Kaso saartay khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya